bhaibheri - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag 'bhaibheri'
bhaibheri bhawa chidhakwa nharo
bhaibheri mukomana musikana church kupfimbana
bhaibheri Mapurisa (ZRP) mapurisa pastor
bhaibheri mukomana musikana church
Matthew 5:28: "Uyo anotarisa mkadzi neziso, akamuchiva, atoita upombwe naye."
Kubva 1 June 2015: "Uyo anotarisa mvura neziso, akaichiva, atogeza." June unotonhora ngatisanyeperana.
bhaibheri Mapurisa (ZRP) pastor mupurisa mufundisi mhondi
Kune vari kutsvaka mabasa...
Pane vari kutsvaga MABASA here pano vari serious. Vhurai mabhaibheri enyu new testament panoperera jowani ndipo pana MABASA
Abraham na Isaki vemu bhaibheri vakubva ku sacrifice
That awkward silence when Abraham and Isaac were walking home after he tried to sacrifice him...
Abraham: I love u son.
Isaac: mdara dai muri mumwe munhu mambosiyana neni.
bhaibheri mapositori pork nyama masasi ekupenga
bhaibheri mapositori kombi zim dancehall Madzibaba masasi emu kombi
Kupfimba sisi veku pentecostal church
Mamwe maSister ekuchurch haasvikirwe zvedzungu . Ukada kuti hi sister makanaka ndakudai unogona kunzi, "get thee behind me satan". Saka unotoita plan... Wakaisa msoro paside, uri 3 metres away wobva wati:
"Sister muri wonderfully and fearfully made, Psalms 139 vs 14. Body yenyu i good measure, pressed down shaken together and runing over ,Luke 6 vs 38".
Unonzwa sisi voti: "ah imika, i receive"
bhaibheri mukadzi murume bonde nyama